अष्ट्रेलियाबाट आएकी श्रीमतीले मानसिक त नाव दिएपछि श्रीमानले गरे देह त्याग ! बहिनीले लेखिन् यस्तो मन छुने स्टाटस – " सुलभ खबर "
अष्ट्रेलियाबाट आएकी श्रीमतीले मानसिक त नाव दिएपछि श्रीमानले गरे देह त्याग ! बहिनीले लेखिन् यस्तो मन छुने स्टाटस
प्रिय रबि दाइ।
सबैलाई माया गर्ने मान्छे , सबैलाई सहयोग गर्ने मान्छे। राम्रो मान्छे नै भगवानको पियारो हुदो रैछ तेसैले हजुरलाई आफ्नो घर लियर जानू भयो। हजुरको आत्माले शान्ती मिलोश ।रबि दाइको मृ त्यु आ त्माघा ती हुनै सक्दैन यो सरासर मा’रिएको होस् मा’नसिक रुपले बिछिप्त बनाइ ,आफ्नै पत्नी बाट। बिहे भयको ३ बर्ष पुगेको, बिहे गरेको केटी रञ्जना मैनाली बिहे गरेछी अष्ट्रेलियामा बसेर बि। येन। पढेको र दाइ नेपाल मै रहनु भएको थियो।
रन्जना मैनालीको जन्मेका घरमा दाइलाई बोलाउने प्रयोग गर्ने स् येता जानू ज्वाइँ , उता जानू ज्वाइँ , यो गर्नु, त्यो गर्नु भनेर खुब प्रयोग गरियो । सबैलाई माया गर्न दाइ सबैलाई सहयोग गर्नु हुन्थियो। रन्जना मैनालीले आफ्नो सम्बन्धकोबारे घर मा सबैलाई बतायेको पाइयो। सबैकुरा जान्दा जान्दै पैसाको लागि र आफ्नो स्वार्थको लागि दाइलाई प्रयोग गरियोको प्रमाणित भयको छ। करिब ठ दिन अगाडि रन्जना मैनाली नेपाल आएको दाइको अनुहार पनि हेर्न नचाहने तर पैसा माग्न आउन खोज्ने सबै परिवार भएर स् छोरीको अष्ट्रेलियामा कलेज फि तिर्नको लागि। रन्जना मैनाली को बाउ मेरो छोरीलाई छोयो भन्ने ब’ला त्कारको के स हाल्दिन्छु भन्ने दाइलाई ।
दाइको अन्तिम सासले रन्जना भन्दा हेर्दा नि नहेर्ने यो कस्तो खाल्को मन को भगवान । यो कस्तो खाल्को प्रवृ त्ति हो भगवान । रन्जना मैनालीको अस्लिरुप रबि दाइको परिवारले बल्ल चिन्नु भयो , चिनिसक्दा दाइ भगवानको पियारो हुनु भयो। हाल दाइको ह’त्यारा रन्जना मैनाली थुनामा छ। कडा भन्दा कडा कार बाहि गरियोस् मेरो दाइको आ त्मालाई शान्ती मिलोस।